Maxaa Cusub – Page 54 – Shabakadda Amiirnuur
Diiradda Jimcaha waa barnaamij muhim ah oo todobaadkiiba maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo gudbiyaa mawaadiic muhim ah oo xiriir la leh bulshada. Todobaadkan waxaa lagu soo qaatay kufsi iyo dhac ay ciidamada DF u geysteen dad rakaab ahaa oo safar ku jiray. […]
Afhayeenka ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, Sheekh Cabdul-caziiz Abuu Muscab ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay wuxuu faafaahin ka bixiyay howlgalladii ciidamada mujaahidiinta ay fuliyeen 72-dii saac ee lasoo dhaafay. Howlgallada oo uu Afhayeenku sida gaarka ah u xusay waxaa kamid ah camaliyadii Nafhurnimada ahayd ee ka dhacday xarunta maamulka degmada […]
Halgankii Daraawiishta waa barnaamij taxane ah oo ay Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ka diyaarisey halgankii Sayid Muxamed Cabdulle Xassan iyo raggii uu hogaaminayay ay la galeen gumeystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga ee kusoo duulay Soomaaliya. Halkan ka dhageyso Halgankii Daraawiishta 10
Wararka ka imaanaya gobollada Jubbooyinka ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ka dhaceen degmada Afmadoow oo katirsan Jubbada Hoose. Xoogagga Shabaabul Mujaahidiin ayaa xalay saqdii dhexe weerar safballaaran ah ku qaaday saldhigyada ciidamada Kenya iyo maleeshiyaadka maamulka Axmed Madoobe ay ku leeyihiin gudaha degmada iyo hareeraheeda. Dadka deegaanka ayaa sheegay […]